Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း)
Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ၊ စိတ်ကျစိတ်ကြွရောဂါ ကဲ့သို့သော စိတ်ဝေဒနာလက္ခဏာများကို ကုသရန်အသုံးပြုပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အခြားအခြေအနေတွေအတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝေဒနာဆန့်ကျင်ဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ သုူရဲ့လုပ်ဆောင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိတိကျကျမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
အစာနဲ့တွဲပြီး သို့ အစာမပါဘဲ နေ့စဉ်၂ကြိမ်မှ၃ကြိမ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကျစိတ်ကြွရောဂါနဲ့ဆက်နွှယ်နေတဲ့ စိတ်ကျရောဂါကိုကုသဖို့အတွက် တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း သောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပမာဏကိုသင့်ကျန်းမာေရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်နေပြီး ကုသမှုပေါ်တုန့်ပြန်မှုအပေါ်မှာလည်း မူတည်နေပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့ ပမာဏနည်းနည်းကနေစပေးပြိးတော့ တဖြည်းဖြည်းတိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ဂရုတစိုက်လိုက်နာ်သင့်ပါတယ်။ အကျိုးကျေးဇူးများများရနိုင်ဖို့ ပုံမှန်မှိဝဲသင့်ပါတယ်။ မှတ်မိစေဖို့အတွက် အချိန်တူတူမှာပဲပေးသင့်ပါတယ်။
သင်သက်သာနေပြီဆိုရင်တောင်မှ ဆက်သောက်သွားဖို့လိုပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့မတိုင်ပင်ဘဲဆေးရပ်လိုက်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးရုတ်တရက်ရပ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ အချို့အခြေအနေတွေကပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ အိပ်စက်ရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ခင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနည်းအောင် ဆေးကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ပေးသင့်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်အခြေအနေဆိုးလာတဲ့မျိုးဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။ သင့်အခြေအနေကကြာရှည်ဖြစ်နေမယ် ပိုဆိုးလာမယ်ဆိုရင်လည်း ပြောပြသင့်ပါတယ်။
Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
quetiapine သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
သင်သို့သင့်မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးမှာ မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်လိုတဲ့အတွေးတွေ ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ၊ စိတ်ကျစိတ်ကြွရောဂါရှိဖူးခြင်း၊ အခြားစိတ်ခံစားချက်ဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ နှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်း (prolonged QT interval)၊ ဆီးချိုသို့ သွေတွင်းသကြားဓါတ်မြင့်ခြင်း
အရက်သောက်ြခ်င်း သို့ အရက်နဲ့အခြားအရာများစွဲဖူးခြင်း
မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်းရောဂါ၊ ရူးသွပ်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေားချို့တဲ့ခြင်း၊ မြိုချရခက်ြခ်င်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း
ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ြခ်ငး၊ သွေးပမာဏကျခြင်း၊ အရမ်းပူလွန်းတဲ့အပူချိန်နဲ့ထိတွေ့နေရခြင်း
နှလုံးရောဂါဖောက်ဖူးခြင်းနဲ့အခြားနှလုံးပြဿနာများ ( ဥပမာ နှလုံးကြီးခြင်း၊ နှလုံးမညှစ်နိုင်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း) ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ သွေးကြောဆိုင်ရာပြဿနာများ ( ဥပမာ ဦးနှေက်ထဲတွင်) ၊ ကိုလက်စထရော triglycerideပမာဏမြင့်တက်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်းကျခြင်းစသည့်ရောဂါရာဇဝင်များရှိဖူးခြင်း
သွေးဖြူဥအရေအတွက်ကျခြင်း( ဆေးကြောင့်ကျခြင်းအပါအဝင်) ၊ ကျောက်ကပ်၊ အသည်း၊ သရက်ရွက်ပြဿနာများ၊ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ သိုင်းရွိုက်ပြဿနာများ၊ မျက်စိတိမ်စွဲရောဂါ၊ ရေတိမ်၊ တက်ြခ်ငး၊ အာရုံကြော neuroleptic malignant syndrome (NMS)၊ သည်းခြေကျောက်၊ magnesium or potassiumကျခြင်း စသည့်ရာဇဝင်များရှိခြင်း
Prolactinပမာဏမြင့်တက်ခြင်း၊ သို့ ကင်ဆာဖြစ်ဖူးခြင်း ( ရင်သား၊ သရက်ရွက်၊ ဦးနှေက်အောက်ခြေရှိအဆီကျိတ်၊ ဦးနှေ်က်) ၊ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေနှုန်းမြင့်နေတယ်ဆိုရင်
g., acetaminophen, methotrexate, ketoconazole, isoniazid, certain medicines for HIV infection). သင့်ဆေးတွေအသည်းကိုထိခိုက်စေနိုင်မန်ုငိနဲ့ ပတ်သက်ပြိးသငိဆရာဝန်ကိုမေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ြခ်င်း၊ နာတာရှည်လည်ချောင်နာခြင်း
ကြွက်သားနာခြင်း၊ တောင့်ခြင်း၊ အားနည်းခြ်ငး
စိတ်ခံစားချက်များဆိုးရွားပြင်းထန်ခြင်း (ရန်လိုခြင်း၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း၊ စိတ်ကျငြခ်း၊ ခံစားချက်များပြင်းထန်ခြင်း၊ စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်ခြင်း၊ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ကသိကအေက်ဖြစ်ခြင်း၊ ထိန်းမရအောင်ကြောက်လန့်ခြင်း၊ ကနာမငြိမ်ခြင်း)
ထုံကျဉ်ခြင်း၊ ပူခြင်း၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းခံစားရြခ်င်း
အရေပြားနီ၊ ရောင်၊ ပေါက်ပြဲ၊ ကွာကျခြင်း
ပြင်းထန်တဲ့မူးဝေခြင်း၊ လစ်ဟာဟာဖြစ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း
ဗိုက်ကျောပြင်းပြင်းထန်ထန်အောင့်ခြင်း( မအိမသာစြဖ်ြခ်င်း အော့အန်ခြင်းနှင့်တွဲလျက်သော်လည်းကောင်း၊ မတွဲဘဲနဲ့သော်လည်းကောင်း)
လက်မောင်း၊လက်၊ ခြေထောက်၊ ခြေသလုံးရောင်ခြင်း
သွေးတွင်းသကြားဓါတ်မြင့်တက်နေသည့်လက္ခဏာများ ( ရေငတ်ခြင်း၊ ဆာလောင်ခြင်း၊ ဆီးသွားခြင်း၊ အားနည်းခြ်င်း)
prolactinသွေးတွင်းပမာဏများခြင်း ( လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကျခြင်း၊ ရေင်သားကြိးခြင်း၊ ဓမ္မတာကျော်သွားခြင်း၊ နို့သီးခေါင်းမှအရည်များထွက်ခြင်း)
စကားပြောရ၊ မြိုချရ အာရုံစူးစိုက်ရခက်ခြင်း။
လမ်းလျှောက်ရာတွင် မတ်တပ်ရပ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း
ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း ( ကိုယ်ဟန်ချက်မထိန်းနိုင်ခြင်း။ မျက်နှာ၊လျှာရှုံနေခြင်း၊ လက်မောင်းခြေသလုံးလှုပ်ရှားမှုများမထိန်းနိြုင်ခင်း)
အမြင်အာရုံပြောင်းလဲမှုများ ( အမြင်ဝါးခြင်း၊ အမြင်အာရုံချို့တဲ့ခြင်း)
ဘယ်ဆေးတွေက Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစောပိုင်းပမာဏ- : 25 mg သောက်ဆေး တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်
တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် 25 to 50 mg သို့ ဒုတိယ်မြောက်နေ့နှင့် တတိယမြောက်နေ့တွေမှာ တစ်နေ့သုံးကြိမ် ဆေးမတိုးရင်မတိုးသလိုတိုးပေး နိုင်ပါတယ်။ လေးရက်မြောက်နေ့မှာတော့ တစ်နေ့ကို300 mg ကနေ400 mg အတွင်း ပေးနိုင်ပါတယ်။ (နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ခွဲပြီးပေးနိုင်ပါတယ်။) တစ်နေ့မှာနှစ်ကြိမ် 25 to 50 mgတိုးပေးတာတွေ လျော့ပေးတာတွေိကို လိုအပ်သလိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထပ်ပေါင်းတာတွေလျော့တာတွေလုပ်တဲ့ကြားမှာ အနည်းဆုံးနှစ်ရက်တော့ခြားသင့်ပါတယ်။
အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး 150 to 750 mg/dayပမာဏအတွင်းမှာ ရှိနေရပါမယ်။ အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးနိုင်တဲ့ပမာဏက 300 mg/dayဖြစ်ပါတယ်။ 800 mg/dayအထက်ဆေးပမာရဲ့စိတ်ချရမှုကို မပြောပြနိုင်သေးပါဘူး။
အစောပိုင်းပမာဏ- 300 mg သောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် နေ့စဉ် အစာမပါဘဲ သို့ အစာနည်းနည်းနဲ့အသုံးပြုပေးန်ုင်ပါတယ်။
ေရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- 400 to 800 mg တစ်နေ့တစ်ကြိမ် သောက်ဆေး ( တုံ့ပြန်မှုနဲ့ ဆေးမတိုးမှုပေါ်မူတည်ပြီး)
အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်ပမာဏ- 800 mgအထက် နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်တယ်လိုပတော့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။
တဖြည်းဖြည်းထုတ်ပေးတဲ့ဆေးပြားတွေကို နေ့စဉ်300 mg တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ at intervals as short as 1 day
ရေရှည်အသုံးပြု ခြင်း( ၆ပတ်အထက်) အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ လွယ်လွယ်ကူကူတုံ့ပြန်တဲ့လူတွေအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့အနည်းဆုံးပမာဏကို ဆက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ရောဂါထိန်းသိမ်းကုသဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသိနိုင်ဖို့ အချိန်ပိုင်းခြားပြန်လည်ပမာဏချင့်တွက်မှုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကြွစိတ်ကျခြင်းနဲ့ဆက်နွှယ်တဲ့ စိတ်အစွဲအလမ်းဖြစ်ခြင်းမှာ သီးသန့်အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း သို့ lithium or divalproex တွေနဲ့ပေါင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
အစောပိုင်းပမာဏ – 50 mg သောက်ဆေး တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်
နေ့စဉ်တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် 50 mgထိတိုးပေးပြိး လေးရက်မြော်က်နေ့မှာတစ်နေ့နှစ်ကြိမ် 200 mgထိတိုးပေးန်ုငိပါတယ်။ နောက်ထပ်ဆေးပမာဏ တစ်နေ့လျှင် 800 mg ပေးပြီး ခြောက်ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ 200 mg/dayထက်မပိုသင့်ပါဘူး။ လူအများစုမှာတော့ တစ်နေ့လျှင်400 mgကနေ 800 mgအတွင်း တုံ့ပြန်မှုပေးကြပါတယ်။ တစ်နေ့ မှာအထက်ပေးခြင်းကြောင့် စိတ်ချရမှုရှိမရှိနဲ့ ပတ်သက်ပြိးမပြောနိုင်သေးပါဘူး။
အစောပိုင်းပမာဏ – 50 mgသေက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
လေးရက်မြောက်နေ့မှာ တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သောက်ဆေး 300 mgထိတိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ အချို့သောလူနာတွေမှာ ၅ရက်မြောက်နေ့မှာ 400 mg ၊ ၈ရက်မြောက်နေ့မှာ 600 mgတိုးပေးခြင်းဖြင့် တစ်နေ့တစ်ကြိမ်600 mg ထိတိုးသွားပေးဖို့လိုပါတယ်။ တစ်နေ့300 mg and 600 mg အသုံးပြုခြင်းက လူနာအများစုမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ တစ်နေ့600 mgအသုံးပြုတဲ့လူနဲ့ 300 mgအသုံးပြုသူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ အကျိုးကျေးဇူးပိုမရခဲ့ကြပ်ါဘူး။
ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေအတွက်ကုသမှုပမာဏ- တစ်နေ့လျှင်50 mgကနေစပြီး ညနေပိုင်းတစ်နေ့တစ်ကြိမ်သောက်ဆေး ၊ လေးရက်မြောက်နေ့မှာ တစ်နေ့လျှင်300 mgထိတိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆေးပမာဏဇယား – ပထမနေ့ 50 mg, Day2– 100, mg, Day3– 200 mg, & Day4– 300 mg
ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေအတွက် သီးသန့်အသုံးပြုမှု သို့ပေါင်းစပ်ကုသမှု (with lithium or divalproex) – သောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ညနေပိုင်း (ပထမနေ့ 300 mg၊ ၂ရက်မြောက်နေ့ 600 mg၊ တုံ့ပြန်မှုနဲ့ဆေးမတိုးမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီး 400 mgကနေ 800 mgထိပေးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Quetiapine (ကွက်တိုင်ရာပင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Quetiapine. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-4689-8274/quetiapine-oral/quetiapine-oral/details. Accessed July 27, 2017